Ubumfihlo - ama-Buddhatrends
Inqubomgomo yobumfihlo ye-Buddhatrend
Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza indlela ulwazi lwakho lomuntu siqu oluqoqwe ngayo, olusetshenziselwayo, nolwabelwana ngenkathi uvakashela noma uthenga ukusukela ku-www.buddhatrends.com ("iSayithi").
Ukwengeza, uma uthenga noma uzama ukuthenga ngeSayithi, siqoqa ulwazi oluthile oluvela kuwe, kufaka phakathi igama lakho, ikheli lokukhokha, ikheli lokuthumela, imininingwane yokukhokha kuhlanganise nezinombolo zekhadi lesikweletu, ikheli le-imeyili, nenombolo yocingo. Sibhekisela kulolu lwazi ngokuthi "I-oda lokwaziswa".
- Isikrini imiyalo yethu yengozi engenzeka noma ukukhwabanisa;
Okokugcina, singabelana ngolwazi lwakho lomuntu siqu ukuhambisana nemithetho esebenzayo kanye nemigomo, ukuphendula ku-subpoena, i-warrant yokucinga noma ezinye izicelo ezisemthethweni zolwazi esizithola, noma ukuvikela amalungelo ethu.
Le Site ayihloselwe abantu abangaphansi kweminyaka engu-18 ubudala
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nemikhuba yethu yobumfihlo, uma unemibuzo, noma ungathanda ukukhalaza, sicela uxhumane nathi nge-imeyili ku- support@buddhatrends.com noma ngeposi usebenzisa imininingwane enikeziwe ngezansi:
I-5900 rue de Verdun I-Montreal Quebec CA H4H 1M4